Amandla Engine - umlando futhi banginika nezeluleko eziwusizo
Njengoba sekunama-the yangaphakathi omlilo injini ngaphambi umbuzo kwaphakama abakhiqizi njengoba ukwandisa amandla injini. I izinjini lokuqala ayehloselwe kuyinto ezingenangqondo kakhulu. Cishe zonke izingxenye zazenziwe steel noma yensimbi, okwenza izindlela ezinkulu, inert futhi ibingaba eyesikhashana ngempela. Ngokwesibonelo, phakathi nekhulu lama-20 imoto ekhulwini injini ukhiqiza 100 amahhashi kuhlaziywe kwahanjiswa ithani. Ukuze uqhathanise, amandla afanayo izimoto zanamuhla motor ukala engaphansi kuka-150 kg.
Ukuze kuzuzwe lokhu, abakhiqizi ngokuyinhloko ngcono mechanical injini ingxenye: ngiphakamisa izinto, Alloys, bethuthuka futhi lwenteke innovation, ezazihlanganisa ukusika-onqenqemeni yokusansimbi kanye ne-chemistry. Ngokwesibonelo, ukusetshenziswa aluminium pistons kungase kwandise amandla injini ngamaphesenti angaphezu kuka-20 ngokunciphisa isisindo nokungqubuzana yayo amandla. Kufanele kuqashelwe ukuthi i-aluminiyamu ngefomu abahlanzekile imoto alisetshenziswa, futhi zisebenza Alloys yayo nge-magnesium, i-silicon manganese futhi chromium.
Ngcono kwezinhlelo zezokwazisa amafutha kanye ukuthungela futhi ngcono kakhulu amandla yenjini. Carburetors ukuvundulula ushintsho uhlobo iflothi, okuyinto ekuqaleni ayengashadile-chamber, ke multi-ekamelweni. Bese kuthi-ke okuqinisekile ka injection ukuthi bavela ibanga elide kusukela monoinzhektorov mechanical kuya multipoint yesimanje oqondile injection.
Endleleni, ngcono futhi ukuthungela uhlelo: kusukela interrupter elula electronic ukuze microprocessors. Akekho injini esimanje ngaphandle kokulawula izinhlaba ukuthi inake wonke nemingcele ngokuphathelene nomsebenzi we-injini - lokushisa kanye kwabantu emoyeni, ijubane imoto, isikhundla mpintsha, crankshaft, camshaft, ukwakheka kwamakhemikhali qeda amagesi, njll Ngenxa yalokho, i-electronic idatha ukuhlelwa uhlelo inquma lemali kahle fuel ukuze sinikezwe ku injini, futhi okwamanje ukuthungela uphethiloli emoyeni ingxube. Ngakho-ke kufinyelelwa ukusebenza kahle kakhulu injini uphethiloli.
Ukwandisa amandla injini diesel uvame kufezwa ngokusebenzisa ukusetshenziswa a turbocharger, epompa umthamo enkulu emoyeni ku uMbhalo by amandla qeda amagesi. Futhi, ukuthuthukisa uphethiloli amandla omlilo kahle e yesimanje diesel wasebenzisa uhlelo «Common Rail».
Ziningi izindlela ukuphoqelela ekhishwa yangaphakathi omlilo engine. Kodwa akufanele sikhohlwe ukuthi ukungenela injini design - akusiyo kuphela kunalokho xaka futhi isikhathi esiningi inqubo, kodwa futhi ebiza kakhulu. Sidinga ephezulu ukucacisa umshini amathuluzi, Alloys akhethekile izinto. Ngokusobala, akukona konke abashayeli bazokwazi ukuchitha ku usheshisa motor isamba ifaniswe ukubaluleka kwesigamu imoto.
Yini engenziwa ukuze amandla injini lalihlale ezingeni ukuphakama?
Okokuqala, kufanele uhlole ukuthi zonke izilungiselelo ifektri yayingokwemvelo. Amafutha, okuyinto esetshenziswa injini kumelwe kuvumelane viscosity kanye neziqu.
Ukuze kuncishiswe ukulahleka edonsa emoyeni Kunconywa ukuba usebenzise isisefo samanzi ka-zero ukumelana - kangaka okuthiwa "wami omkhulu" - okuhle, kukhona manje ukhetho olukhulu izihlungi. Zingase zihluke ngefomu, usayizi, indlela nenkanuko edlulele, watusa injini ivolumu. Ngenxa yokuthi i-abakhiqizi ihlunge ngokuba adapters ngoba lwezinhlobo ezivame kakhulu injini, ukufakwa yokuhlunga enjalo akudingi mzamo abalulekile futhi ngezindleko.
Ukwandiswa amandla motor futhi kuncike ngcono qeda uhlelo. Khumbula ukuthi uma imoto yakho akuyona uhlelo siphelile, kungcono ukuba baphendukele esiteshini inkonzo, okuyinto ngokukhethekile qeda izinhlelo.
"Citroen": ukuhlela nokuchazwa okufushane
Kangakanani ukwelashwa anticorrosion izimoto ngezandla zabo nokuthi ingabe uyafisa yini na?
"Mercedes GLK 300": ezibekiweko lobuchwepheshe kanye nencazelo crossover ethandwa German
"Manol" (uwoyela): nokubuyekeza amakhasimende. Izilinganiso ukuhlolwa
Avtobafery: ngokucophelela ngobuhle nangobubi bawo, ukubuyekezwa abanikazi imoto. Korean interturn imicamelo
Imithetho Regulator: SDA
Okunhlobonhlobo okusajingijolo Bryansk kumangale incazelo, betshala, ukunakekelwa, zizalela
Deka - Iyini? Imisebenzi kudivayisi kanye nencazelo
Kanjani ukuba iqoqe, igcine futhi akhiphe herbarium amaqabunga?
Deck nanjengomPristi hearthstone. amathiphu
Indlela yokukhipha ifayela kusuka ku-ZIP archive: Izindlela nezincomo
Izingane Tycoon: Indlela baphile izindlalifa ukunotha ezinkulu?
Kusuka ezifundazweni kuya kubamabhizinisi abaphumelelayo. Umbono omuhle kakhulu webhizinisi edolobheni elincane
Ikhompyutha itholakala kanjani eyedwa?
Anatoly Tarasov Biography futhi ezithakazelisayo amaqiniso mayelana isithombe
Iphutha: "Lo d3d11.dll ifayela ayitholakalanga." Yini okumelwe uyenze?
Intaba ephakeme kunazo esimisweni sonozungezilanga: search for iqiniso
Coffee French: incazelo, ukwakheka kanye izici ukulungiswa